Yan Aung: ပြောင်းဖူးအိုးကင်းကြော်နှင့် ၀က်သားအစပ်ချက်
ဒီနေ့တော့ ၀က်သားအစပ်ချက်မယ်ဗျ. ပြောင်းဖူးလည်း ကြော်မယ်. ဧည့်သည်လေး တစ်ယောက်ကိုလည်း ထမင်းစားဖိတ်ထားသေးတယ်. ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကိုတော့ နောက်ဆုံး ကျရင်သိလိမ့်မယ်.
၀က်သားကိုနူးအိနေမှ ကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ၀က်သားမချက်ခင် နူးနေအောင် အရင်ပြုတ်တယ်ဗျ. နာရီဝက်လောက် အရင်ပြုတ်ထားလိုက်တယ်. နူးအိနေတဲ့ ၀က်သားဟင်း ကိုစားရတာက ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ပါးဖောင်းဖောင်းနဲ့ ချစ်သူလေးကို လက်နှစ်ဖက်ထဲမှာ ညှပ်ပြီး အားရပါးရ အာဘွားပေးရတာနဲ့တူတယ်. ပါးဖောင်းဖောင်းပိန်ပိန် နမ်းရဖို့က အဓိကလို့ ဆိုသူများကတော့ မပြုတ်ပါနဲ့. တစ်ခါတည်းသာ အိုးထဲကို ထည့်ချက်ပါ. Feel ငုတ်ရင်တော့ ကျွန်တော့်နာမည်ကို မတမ်းတပါနဲ့.
အိုကေဗျာ. နည်းနည်း လိုင်းပြောင်းသွားတယ်. ဆက်ပြောမယ် ၀က်သားကို ပြုတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကြက်သွန်ဖြူနီကို ဆီသတ်ထားလိုက်တယ်ဗျ. ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ထည့်ပါ။ အလုံးလိုက်ကြီး သွားမထည့်ပါနဲ့. ဆီသတ်ထားတုန်းမှာ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် ရေခဲသေတ္တာထဲက ပြောင်းဖူး ၂ ဖူးလောက်ကို ထုတ်ပြီး ဓားနဲ့ ခြစ်တယ်.
အဲဒီ့အချိန်မှာ ဒယ်အိုးထဲက ကြက်သွန်နည်းနည်းလောက် ၀ါစပြုလာပြီ. ဆီသတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ထဲက နည်းနည်းကို အိုးထဲမှာပဲထားတယ်. ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်ကိုတော့ ၀က်သားဟင်းအတွက် ဖယ်ထားလိုက်တယ်. အိုးထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ ကြက်သွန်ကို နည်းနည်း ထပ်တည်ထားလိုက်တယ်. ပြောင်းဖူးကြော်နဲ့ ရောဖို့အတွက်ပါ. ခဏလောက်နေတော့ ခြစ်ထားတဲ့ ပြောင်းဖူးလေးတွေကို အိုးထဲ ရောထည့်လိုက်တယ်။ ဆား၊ အချိုမှုန့် အနေတော် ထည့်လိုက်တယ်။ အဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပြီး ပေါင်းတင်သလိုမျိုးလေး ခဏထားလိုက်တယ်။ မွှေပေးဖို့တော့ မမေ့နဲ့ပေါ့ဗျာ.
၀က်သားပြုတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာပဲ ထမင်းအိုးလည်း တည်ထားလိုက်တယ်။ ခုလောက်ဆို ၀က်သားလည်း နည်းနည်း နူးလောက်ပြီလေ. ပြုတ်ထားတဲ့ရေတွေကို သွန်ပြီး ရေသစ်လဲတယ်ဗျ. အဲဒီ့ရေတွေကို ပြန်သုံးလို့တော့ရပါတယ်. ကျွန်တော်ကတော့ ရေကြည်အသစ်လေးတွေ ထည့်ရတာပိုနှစ်သက်လို့ပါ. ရေနည်းနည်း ထပ်ထည့်ပြီးတော့ ဆီကို ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲလောက် ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆီသတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီကိုထည့်ပါတယ်. ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ သစ်ဂျပိုးမှုန့်၊ Meat Tenderer လို့ခေါ်တဲ့ အသားကိုနူးစေတဲ့ အမှုန့်၊ ကုလားလေး မဆလာ၊ အရောင်တင်မှုန့်လေးတွေ ထပ်ထည့်ပါတယ်။ အစပ်ကြိုက်သူများအတွက်ကတော့ ငရုတ်သီးခြောက်လေး ၄~၅ တောင့်လောက် ခြေပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ အဖုံးပြန်အုပ်ပြီး တည်ထားလိုက်ပါ။ Timer ကို မိနစ် ၂၀ ပေးထားလိုက်ပါတယ်. ဒါတွေ လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပြောင်းဖူးကြော်အိုးကိုလည်း မကြာမကြာ မွှေပေးပါဦး.
ပြောင်းဖူးကြော်အိုးကို ၈ မိနစ် ၁၀ မိနစ်လောက်နေရင် ချလိုက်လို့ရပါပြီ. သိပ်ကြော်စရာ မလိုပါဘူး. ၀က်သားအိုးကိုတော့ ခဏပစ်ထားလို့ရပါတယ်. ၀ါသနာပါရင် ဟင်းချက်ရင်း သီချင်းလေးလည်း နားထောင်ပေါ့ဗျာ. ကျွန်တော်ကတော့ ထူးအိမ်သင်နဲ့ မို့မို့ရဲ့ မျက်စိမှိတ်ချစ်နေမယ် သီချင်းလေးနဲ့ ငြိမ့်နေခဲ့တာပေါ့ဗျာ. လက်တွေ့မှာတော့ မျက်စိမမှိတ်ရဲပါဘူး. ဟင်းအိုးတွေ တူးကုန်မှာပေါ့. အင်းဘာလိုလိုနဲ့ မို့မို့လည်း မင်္ဂလာဆောင်သွားတာ အတော်ကြာပေါ့လို့တောင် တွေးမိလိုက်သေးတယ်.
ဟင်းအိုးတွေ တည်ထားခဲ့တုန်း Kitchen ကို ပြန်ရှင်း၊ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ ဆေးပါတယ်။ ဗိုက်လည်း ဆာလာပြီဗျ. ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကို နေရာတကျ ထားသိုပြီးတော့ ၀က်သားအိုးကို မွှေပါတယ်. ရေနည်းနည်းခန်းသွားတာ တွေ့ရတော့ ရေထပ်ထည့်ပါတယ် အမှိုက်အိတ်ကို အသစ်လဲထည့်. ဇွန်းယောက်မတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြန်သိမ်းပြီးတော့ ၀က်သားအိုးကို မီးနည်းနည်းလျှော့လိုက်ပါတယ်. ၁၀ မိနစ်လောက်ထပ်တည်ဦးမှာပါ.
ပြီးတာနဲ့ ၀ါသနာပါတားမရ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကင်မရာကိုထုတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရာလေးတွေကို တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပါတော့တယ် ခင်ဗျာ.. ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ကွန်ပြူတာထဲ ပြန်ထည့်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ၀က်သားအိုးလည်း ကျက်ပါပြီ. ထမင်းပေါင်းအိုးဆီကလည်း ချောက်ခနဲ ခလုတ်လေးတက်သွားတာ တော်တော်ကြာပါပြီ.
အိုကေ အိုကေ. ဆွဲလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ..
ထမင်းဟင်းတွေကို ခူးခပ်ထည့်၊ ရေခဲရေ အေးအေးလေးတစ်ခွက်ကို အဆင်သင့်ဘေးမှာထား၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဧည့်သည်တော်လေးကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီးသကာလ မှတ်တမ်းတစ်ချက်တင်လိုက် ပါသေးတယ်. ထို့နောက်တွင်တော့ စားတော်ခေါ်ခန်း စ၏…
အင်း..ကိုရန်ကြီးကိုဟင်းချက်တာသေချာသင်ပေးရအုံးမှာပါ။ ဒီပုံနဲ့တော့သိပ်အဆင် မပြေသေးဝူး။။ ကွိကွိ..ဆရာကြီးဝင်လုပ်တာ..
ဘာညာရေ. တကယ်သင်ပေးပါဗျာ. ကျွန်တော်ကတော့ သိသလောက်ရှိသလောက်နဲ့ ချက်ပြီး နေရတာ. ချက်ပေးမယ့်သူလေးကလည်း မရှိဆိုတော့...
တော်ပြီဗျာ. ပြောရင်းနဲ့ ရင်ထဲကဆို့လာပြီ. ရွှတ်ဖတ်..
Nice One! and funny;-)